Gameevil ရဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံးလက်ရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အပြောင်မြောက်ဆုံးထုဆစ်ဖန်တီးထားတဲ့ Plants war ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ playstore မှာ voting 4.8 ရထားပါတယ်။ real time tactical strategy အမျိုးအစားဂိမ်းလေးပါ။ ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်ပြီး ကစားရတာ ဘာနဲ့ဆင်တူလဲဆိုတော့ dota နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ဂိမ်းအစပိုင်းမှာ ကိုယ်က leafy ဆိုတဲ့ရေကန်ထဲကပေါက်ဖွားလာတဲ့ချစ်စရာသစ်ရွက်ဇာတ်ကောင် hero လေး နေရာကနေ ကစားရမှာပါ။ သစ်ပင်တွေနဲ့ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေကြားက ပြင်းထန်လှတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာ သူက သစ်ပင်တွေဘက်က ဦးဆောင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ရမှာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ
Plants War Offline Games
Plants War Offline Apk Old Version
Plants War Offline Mod Apk
Download the latest version of Plants War for Android. Jump into the ring and fight with your army of plants. Plants vs zombies offline installer. Most people looking for Plants vs zombies offline installer downloaded: Plants vs. 4.2 on 2302 votes. Get ready to soil your plants in an all-new action-strategy game from PopCap! At War zombies, with its. Plants War v1.4.0 (Offline MOD) APK Name: Plant War Version: 1.4.0 Genre: Arcade & Action Vendor: Gamevil Inc. Platform: Android Requires: 2.2 and up. Sword Art OnlineEND Subtittle Indonesia.
အခြား hero ဇာတ်ကောင်လေး အများအပြားကိုလည်းရွေးချယ်ကစားနိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် mana တွေ ၀ယ်ယူတိုက်ခိုက်နိုင်သလို hero တစ်ကောင်ချင်းအလိုက်လည်း ထူးခြားလှတဲ့စွမ်းရည်(skills)တွေရှိနေပါသေးတယ်။ စွမ်းရည်တွေကိုလည်းတိုးချဲ့မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
Arena တစ်ခုမှာ levels ပေါင်း ၅၀ ပါဝင်ပြီး normal hard hall ဆိုတဲ့ difficult 3ခုရွေးချယ်ကစားနိုင်တာမို့ ဂိမ်းကစားရင်း ထမင်းစားချိန် အိပ်ချိန်တွေကို မေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းလေးကိုကစားရင်း နောက်ပိုင်း levels တွေမှာ ခက်ခဲလာမှာဖြစ်ပြီး အနိုင်ရဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်အိတ်ကပ်ထဲက ပိုက်ပိုက်တွေ gameevil ကိုပေးဆပ်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် အခုကျနော်တင်ပေးထားတာ offline mod apk ဖြစ်တာမို့ တိုက်ခိုက်ရတာလွယ်ကူနေဦးမှာပါ။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ဆော့ကြည့်လိုက်ပါ။ ဂိမ်းဆိုက်ကတော့ 21.6mb ပဲရှိပါတယ်။ data မလိုပါဘူး။
Credit to... ထာဝရ နည်းပညာ ဆုံဆည်းရာ